Manchester United oo dalab qaali ah ka gudbisay Raphael Varane si ay u hesho saxiixiisa – Gool FM
Real Madrid oo baxar ku jirta, kaddib markii ay fariin kaga timid…..
Griezmann oo si jees-jees ah kaga hadlay wararka ku aadan inuu ka walaacsan yahay imaatinka Neymar Jr
Antonio Conte oo weli ka go’an inuu lasoo wareego xiddig ka tirsan Barcelona
Waa kuwee SHANTA xiddig ee Qaarada Africa ugu fiicnaa taariikhda??
Xiliga uu bilaabi doono Hazard waayihiisa ciyaareed ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Barcelona oo war farxad leh ka heshay xarunta tababarka kahor kulanka Real Betis
Rivaldo oo sheegay xiddiga uu jeclaan lahaa in Neymar Jr uu ka garab ciyaaro haddii uu ka dhaqaaqo PSG
Lambarka uu Franck Ribery u xiran doono kooxdiisa cusub ee Fiorentina oo la shaaciyey… (Waa kuma ciyaaryahanka looga siibay?)
Manchester United oo dalab qaali ah ka gudbisay Raphael Varane si ay u hesho saxiixiisa
Dajiye September 13, 2018
(Manchester) 13 Sept 2018. Manchester United ayaa dalab xoogan u soo bandhigtay daafaca kooxda Real Madrid ee Raphael Varane suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, sida ay warisay warbaahinta dalka England.
Raphael Varane ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United isbuucyadii u danbeysay ka dib marka ay soo baxeen warar ku aadan in Zinedine Zidane la filayo inuu badal u noqdo Jose Mourinho.
Mundo Deportivo ayaa laga soo xigtay in Manchester United ay xiiseyneysay saxiixa Raphael Varane muddo dhowr bilood ah, isla markaana ay ka gudbiyeen qiimo dhan 100 milyan ginni.
Wargeyska ayaa sheegay in Real Madrid ay iska diiday dalabka kaga yimid kooxda Manchester United, xili sidoo kale laacibka uu isna xiligan ku fikireynin inuu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu.
Raphael Varane ayaa ahaa bar-tilmaameedka koowaad ee tababare Jose Mourinho si uu ugu xoojisto qeybta difaaca dambe, waxaana ay kooxdu isku dayday inay wadahadal la gasho Real Madrid, intii lagu jiray safarka caalamiga ah ee Mareykanka, laakiin Los Blancos ayaa si cad u sheegtay in Varane uusan iib ahayn.
Del Piero oo sheegay inuu xiiseeyo daawashada Dybala iyo Mbappé, marka loo fiiriyo Ronaldo iyo Messi
Odriozola oo sheegay in Asensio uu ku socdo wadadii uu ku noqon lahaa mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan Spain